MaKitchini mazano Ine Kamuri Yekudya Kubva ku15 Kusvika 20 Square | Art sens - mazano eimba nebindu
08.01.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Zvemukati, Cikoni, Imba yekudyira
Pfungwa dzeimba yekudyira dzakaratidzwa mumitsetse inotevera iri mhinduro yakanaka yekubatanidza nzvimbo yekubikira uye yekudyira mune imwe kubva ku15 kusvika 20 skita yemamita. Quadrature yakadaro yakakwanira kumisikidza nzvimbo inoshanda yekugadzirira kwekudya uye sekona yekudyiwa kwayo. Zvichienderana nesaizi yekicheni, tafura yekudyira uye chimiro chemukamuri, nzvimbo diki ine fenicha yakagadziridzwa yekuzorora inogona kuiswa kunyange. Kusarudzwa kwemavara, chimiro, kushongedza uye zvimwe zvinongedza kungoona kwako kwekugadzirwa kwekupedzisira, nekuti kana iri nyore, ichaita nyore kuchinja kana kuenderana. Kuita kusanganisa kwemavara uye zvishongo zvakapfuma zvinoyevedza asiwo zvakaringana nekuti zvakanyanya kuoma kusanganisa nemamwe mazano. Naizvozvo, zvisarudzo zvekugadzira zvine hunyanzvi zvinowanzoda shanduko yakakwana kana nharaunda dzadzinoumba dzichibva dzorega kuunza mafaro nekutandara.
kicheni dhizaini, mazano ekicheni, imba yekudyira mazano, zvemukati dhizaini, kicheni ine nzvimbo yekudyira, imba yekudyira ku20 square, imba yekudyira nekicheni, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Kicheni ine chimiro chako
Iyo kicheni ndiyo inonyanya kukoshesa imba uye panguva imwechete iyo inonyanya kuoma kuendesa ...
Pfungwa shoma dzekamuri yekurara uye isina kujairika. Sunungura zvaunofungidzira, shongedza ...
Iwo mavara ari mumba yekutandarira
Imba yekugara ndiyo nzvimbo yatinoshandisa yakawanda yenguva yedu yekuzorora. ...
Inonakidza dhizaini yekicheni
Chii chinofanira kunge chiri chakanakira cuisine? Yakashongedzwa, yakashongedzwa, yakanaka, inodhura, yakarebesa kana yakagadzirwa ...
Kicheni yemazuva ano mune chena
Ichena kicheni inogara iri yemazuva ano mhinduro mukati. Iko kutaridzika kwemazuva ano kwekicheni kazhinji kwakachena ...
Chese chinhu chinogona kudikanwa kuitira chimiro uye nyaradzo yeimba yako, iwe uchawana mu ...
Kicheni counter yepamusoro mazano uye matipi
Iyo yepamusoro bar inowanzoshandiswa mukicheni seyakagadzika kana yakabatana kune imwe fenicha ...
Dhizaini yemukati - mazano ezvimwe zvisina kuwonekera sofa
Mazhinji emukati magadzirirwo emapurojekiti anotsigira zvinoshamisa ficha zvigadziriso uye ikozvino dhiza ...